मृत्यु कुरिरहेकी जुम्लाकी सन्ध्यालाई भेट्दा रोए गगन थापा, भेटमा के भने ? - Arghakhanchi Saptahik
मृत्यु कुरिरहेकी जुम्लाकी सन्ध्यालाई भेट्दा रोए गगन थापा, भेटमा के भने ?
काठमाडौं, ११ असोज । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट मृत्युको पुर्जा पाएकी जुम्लाकी सन्ध्या शाहले पत्रमार्फत स्वास्थमन्त्री गगन थापासँग भेट इच्छा जाहेर गरेपछि मन्त्री थापाले उनलाई भेटेका छन् ।
भेटमा सन्ध्याले आफ्नो परिवारिक आवस्था र आफ्नो उपचार गराउँदा परिवारको आर्थिक आवस्था नै एकदम नाजुक भइसकेको बताइन् ।
उपचारका क्रममा आफूले भोगेका पीडाहरु पनि सन्ध्याले मन्त्री थापालाई सुनाइन् ।
सन्ध्याको दुखेसो सुनेपछि भावुक भएका मन्त्री थापाले आम नेपालीले स्वास्थ उपचारमा समान पहुँच राख्न सकुन् भनेर नीतिगत रुपमा काम गरिरहेको बताए । अघिल्लो सरकारको पालामा सन्ध्याको उपचारको फाइल मन्त्रालयमा पुगिसकेको आफुले आफ्नो सचिवालयबाट पनि जानकारी पाएकोले त्यो फाइललाई खोजेर अघि बढाउने र के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यसबारे सचिवालयलाई निर्देशन दिने बताए ।